घर र परिवार, किशोरीहरूको
किशोरावस्था - हाम्रो बच्चा हिजो र आज वयस्क बच्चा हुँदा एक अवधि आफ्नो जीवनको एक नयाँ चरण प्रवेश गर्छ। यो समयमा, यस शारीरिक, शरीर, हर्मोन surges परिवर्तन व्यक्ति, चपेटामा र घाइते बन्छन् अर्को शब्दमा - "बाल्यकाल गर्न विदाई"। लागि किशोरीहरूको impulsivity, volatility, द्वारा विशेषता छ उच्च आत्म-सम्मान, रोमान्टिक सम्बन्धमा प्रूडेंस र cynicism, इच्छा गोपनीयता छ।
चुनौतिहरु के के हुन् किशोरावस्था को र आफ्नो समाधान विशेषज्ञहरु आवंटित? का तिनीहरूलाई हेरौं।
बच्चा पहिले नै एक किशोरी छ, र आमाबाबुको लागि - अझै पनि एक बच्चा। हरेक आमाबाबुले आफ्ना धेरै लामो समय को लागि आफ्नो बच्चा जगाउन गर्न इच्छुक छ, तर त्यो छ जो व्यक्ति छ भन्ने बुझ्न पर्छ जीवन सही। यो आफ्नो बच्चा को जीवन नियन्त्रण उहाँलाई यो आफैलाई बाँच्न मौका दिन बन्द गर्नुपर्छ। अधिकार र दायित्व (तपाईं परिवार परिषद मा यो गर्न सक्नुहुन्छ) को नयाँ सर्कल बनाउन, बच्चा थाहा अब निर्णय यसलाई आफ्नो नतिजा लागि जिम्मेवार त्यसैले आफ्नै लिन र, गरौं। कसरी विभाजित स्पष्ट देखाउन परिवार बजेट, तिनीहरूले आउन कसरी र कहाँ पैसा खर्च छ र कहाँ। एक वयस्क रूपमा व्यवहार गर्छन्।
बच्चा पहिले नै एक किशोरी छ, र समाज यो व्यग्र उब्जाउ गर्न अनुमति छैन। उहाँले "धेरै" छ, तर यो सम्भावना छैन सक्छन् महसुस गर्न सोच्छ। किशोरावस्था को वर्तमान समस्या आउटपुटहरू एक स्वतन्त्र आय हुन सक्छ। जागिर प्राप्त, को किशोर आफ्नो साथीहरूको नजरमा आफ्नो आत्म-सम्मान उठाउनु वयस्क देखा हुनेछ, र पनि आफ्नो खर्च हुनेछ।
बच्चा पहिले नै एक किशोरी छ, तर उपस्थिति सधैं यो अनुरूप छैन। सानो कद, लामो कान, स्थलहरू, अनुकूलन उपस्थिति, वजन - उपस्थिति haunt बारेमा सोच कुनै पनि किशोरी। यो कम आत्म-सम्मान नेतृत्व विकास गर्न सक्छन् एक inferiority जटिल। किशोरावस्था को समस्या र केवल - प्राकृतिक र आवश्यक प्रक्रिया हो यो सबै एक किशोरी बताउन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सबै Undertakings मा बच्चा समर्थन, आफूलाई को खोज मा, उहाँलाई यो आफैलाई समाधान गर्न एक मौका दिनुहोस्। आखिर, यो पछि आफ्नो सम्बन्ध भर पर्न सक्छ।
यी किशोरावस्था को मुख्य समस्या हो। यो हरेक किशोरी प्रकट र कुनै पनि मद्दत बिना नै महसुस गर्न चाहन्छ जो एक नयाँ स्वतन्त्र जीवन, सुरु हुँदैछ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ, म भवदीय भइरहेको छ के आफ्नो भावना, छैन निन्दाले व्यक्त र आफ्नो राय गर्ने अधिकार आदर, र त्यसपछि किशोरावस्था को समस्या को समाधान स्पर्श छैन।
सधैं लायक छ कि एक राय, आफ्नो चरित्र र जीवन र वातावरण मा आफ्नो विचार छ मानिस उहाँ सम्झनुहुन्छ तपाईं अघि। किशोरावस्था समस्या - मात्र जीवनको बच्चाको तरिका को शुरुवात हो, त्यसैले तपाईं वयस्क जीवनको मा आफ्नो संक्रमण सुनिश्चित गर्न रूपमा बिस्तारै सकेसम्म आवश्यक छ। सही दृष्टिकोण र आफ्नो बच्चा को सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन - कि समस्या को सुलझाने वफादार नर्सों सहयोगिहरु छ यौवन अवस्था।
घरमा वा गाउँमा, सडक मा हिउँदमा गर्न कुराहरू? को हिउँदमा एक छुट्टी मा गर्न कुराहरू?
प्रारम्भिक गर्भावस्था: कसरी एक किशोरीले जीवन परिवर्तन गर्न?
बालिका लागि प्रश्नावली लागि रोचक प्रश्नहरू
म उमेर 14 मा सेक्स हुन सक्छ? सल्लाह र मनोवैज्ञानिक को सहायता
तपाईं कसरी पुरानो पूरा गर्न सक्छन् थिए? पहिलो सम्बन्ध किशोर
को जंगल मा गुमाए प्राप्त गर्न रूपमा कसरी, सूर्य द्वारा नेभिगेट गर्न। परिभाषा बादल मडारिरहेको पक्ष
Dzho Barbaro सात सिकार
अभिनेत्री Irina Pechernikova: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
जीवनी हकी Kharlamov - विश्व हकी तारा
Lomonosov Mihail Vasilevich गर्ने छ: जीवनी र काम
अर्थशास्त्र संकाय VSU: एकाइ र पारित स्कोर संग familiarity
भोक कम गर्न र भोक दबाउन कि जडीबुटी। समीक्षा पातलो